Birao ho an'ny olona mety maty - Geofumadas
Office for mahafaty
Jereo ny koordinary UTM ao amin'ny Google Maps and Street View
Dingana 1. Ampidino ny môdely famahanana data. Na dia mifantoka amin'ny fandrindrana UTM aza ny lahatsoratra, ny fampiharana dia manana modely amin'ny latitude sy longitude miaraka amin'ny degre desimal, ary koa amin'ny degre, minitra ary segondra. Dingana 2. Ampidiro ny modely. Rehefa mifantina ny modely miaraka amin'ny angona, ...
Google Earth KML Office for mahafaty
Ampidiro ny sari-tany ao Excel - mahazo koordinatera jeografika - mpandrindra UTM
Map.XL dia rindranasa mamela anao mampiditra sarintany ao amin'ny Excel ary mahazo mpandrindra mivantana avy amin'ny sarintany. Ho fanampin'izany, azonao atao koa ny mampiseho ny lisitry ny latitude sy ny longitude amin'ny sari-tany. Ahoana ny fampidirana ny sari-tany ao amin'ny Excel Rehefa tafapetraka ny Program, dia ampiana ho takelaka fanampiny antsoina hoe "Map", miaraka amin'ny fiasan'ny ...
Google Earth Office for mahafaty
Cartografia, Google Earth / Maps, Pirinty voalohany
Manafatra fandrindrana avy amin'ny Excel ka hatramin'ny QGIS ary mamorona Polygons
Ny iray amin'ireo mahazatra mahazatra amin'ny fampiasana ny Geographic Information Systems dia ny fananganana sosona spatial avy amin'ny fampahalalana avy any an-tsaha. Na maneho ny fandrindrana, ny tampon-kazo, na ny valin'ny fisandratana, ny fampahalalana dia mazàna ao anaty rakitra misaraka amin'ny koma na takelaka Excel. ...
Office for mahafaty QGIS
Mikrosta: Manoritra koorda sy fanamarihana avy amin'ny Excel
Ny tranga: manana angona nangonina tamin'ny GPS Promark 100 aho, ary amin'ny alàlan'ny fampiasako ny application GNSS aorian'ny fikirakirana an-tsokosoko ananan'ireto tarika ireto dia mamela ahy handefa ny vaovao any Excel. Ny tsanganana voamarika amin'ny mavo dia ny fandrindrana atsinanana sy avaratra ary ny fanamarihana isanisany; ny ambiny dia fampahalalana mifandraika amin'ny fanodinana ihany. Ny olana: takiko ny mpampiasa ...
Bentley Systems Office for mahafaty
GPS / Fitaovana, Microstation-Bentley
Niova fo ara-jeografia Flag ho decimal diplaoma, UTM sy ny mpitan-in AutoCAD
Ity môdely Excel ity dia natao mba hanovana ireo fandrindrana ara-jeografika ho UTM, avy amin'ny endrika decimal ka hatramin'ny degre, minitra ary segondra. Ny mifanohitra amin'ilay maodely nataontsika teo aloha ihany, araka ny hitantsika eo amin'ny ohatra: Fanampin'izany: Mampifangaro azy ireo amin'ny tadiny Izy io dia mamadika azy ireo ho mpandrindra UTM, miaraka amin'ny safidy misafidy ...
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny mailaka ivelany amin'ny Gmail mampiasa POP3
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba handaminana ny POP Gmail. Ho an'ireo mandeha be dia be na mila miditra mailaka amin'ny solosaina samihafa, dia tena tsy dia tsara ny fampiasana ny client Microsoft Outlook; Na dia ho an'ny andrim-panjakana aza dia saika tsy azo ihodivirana izany, rehefa avy nahalala ny Gmail dia mahatsiaro tena ho toy ny zana-zohy mampiasa Outlook izay nahavita fandrosoana kely ...
Amboary ny Smart Quotes ho an'ny teny mahitsy amin'ny Microsoft Word
Olana mazàna io, rehefa manova lahatsoratra html amin'ny Microsoft Word na Live Writter izahay. Ny olana dia kaody iray toy ny fanontaniana hafahafa momba ny teknolojia CAD Hanome olana antsika izy io, satria ny marika nalaina izay nobodointsika dia tokony ho ireto manaraka ireto: Fanontaniana hafahafa momba ny teknolojia CAD Rehefa te hisolo toerana amin'ny ...
Office for mahafaty Wordpress
Ahoana ny fomba hananganana index mandeha ho azy miaraka amin'i Microsoft Word
Matetika ny Microsoft Word dia iray amin'ireo programa nianaranay hampiasaina nefa tsy nianatra. Tamin'ny fikitihana sy ny fidirana dia nahatsapa izahay fa ampiasaina hanamboarana antontan-taratasy, misy latabatra io, ireo latabatra dia mamintina toy ny ao amin'ny Excel ary misy zavatra fanampiny ao amin'ilay efijery manga Word Perfect. Tsy mbola ...
Asehoy ireo fisie vao haingana, Word sy Excel
Mitranga amintsika matetika, ny manadino ny toerana nitahirizana rakitra iray. Indraindray isika dia mamindra azy io, manokatra azy io ao anaty fampirimana fampidiran'ny browser na loza fotsiny ilay motera fikarohana Windows efa lany andro. Raha izany rakitra izany dia ao anatin'ny 50 nosokafantsika farany, ny fomba haingana indrindra dia ny mahita azy amin'ny ...
Ahoana ny fanesorana ny koma sy ny rohy mankany amin'ireo nomerao ao amin'ny Excel
Imbetsaka rehefa maka tahaka ny angon-drakitra avy amin'ny Internet ka hatrany amin'ny Excel, dia misy isam-batan'olona manasaraka an'arivony. Tsy maninona na oviana na oviana hanovantsika ny isan'ny sela ho isa, dia mbola lahatsoratra ihany io satria tsy azon'ny Excel ny fisarahana an'arivony aorian'ny isa 6, izany hoe mihoatra ny iray tapitrisa. Hataoko…
Internet sy Blogs, maro
Ahoana ny fampitahana ireo antontan-taratasy roa
Matetika mitranga amintsika izany, rehefa miasa amina antontan-taratasy iray isika, avy eo misy manova azy nefa tsy manamarina ny fanitsiana ny fanovana ary na ho ela na ho haingana dia mitaky fampitahana ireo roa ireo isika. Na dia mahalana aza aho vao manoratra momba ny programa ho an'ny olombelona tsotra, dia manararaotra an'io fotoana io aho satria tafiditra ao amin'ny Microsoft Word ity fiasa ity, ary manao izany ...
4 Olana: Acer Aspire iray, Aza mandefa Dataslash
Raha ny solosaina Acer Aspire, ny fampifangaroana handefasana ny fijery avy amin'ny efijery mankany amina projecteur mankany amin'ny monitor ivelany dia ao amin'ny Fn + F5 mitambatra. Mety hitranga fa tsy mamaly izy ireo, ary rehefa manana olona 200 eo alohanao ianao dia olana lehibe izany. Andao hojerentsika ny fomba famahana azy. Raha ao anaty ...
Acer hiandrandra iPad Office for mahafaty
My egeomates, maro
Change taratasy nanjo an'i Microsoft Word sy ny maro hafa
Word 2007 sy ny kofehiny, toa ny AutoCAD, dia namela zavatra tsy voafehy ho antsika rehefa maika isika. Ny olana tadiaviko hanova ny lahatsoratra avy amin'ny sora-baventy mankany amin'ny sora-baventy, izay teo aloha dia tsindry iray monja niala ny menio Tsy fantatro hoe aiza izy io, ary raha eo aho dia tsy nanana faharetana ampy, ka ...
Niova fo ambaratonga / minitra / segondra mba decimal
Fotoana vitsy lasa izay dia nanontaniana ahy izany, ary satria toa somary nihazakazaka ilay namana ary androany ny andro hankalazana zavatra maro, ity misy fitaovana iray ahafahanao manova ny fandrindrana ara-jeografika, ny degre amin'ny toerana desimal. Maninona ny latabatra fiovam-po dia mahazatra ny mahita koordinatera izay manana degre, minitra, segondra, ...
tapakila Google Earth Office for mahafaty
MapinXL, sarintany avy amin'ny Excel
MapinXL dia rindrambaiko natsangan'ny ARTICQUE, natokana ho an'ny olona birao, izay tsy manam-pahaizana GIS fa te-hanaitra ny sarintany miloko. Mandany ny fiainantsika maniry hampifandray ny sarintaninay amin'i Excel izahay, amin'ny fahafantarana fa ny hafa tsy afaka lavitra ny vahaolana Microsoft; ary izany no nanaovantsika arivo ...
Fomba hahafantarana ny tenimiafin'ny rakitra
Misy fitaovana isan-karazany amin'ny Internet ahafahanao mahita teny miafina miafina, na hoe hiantsoantsika azy tsara kokoa anio isika: ny teny miafin'ny rakitra iray, tsy mikasa ny hampiroborobo lolompo izany aho; Aleo kosa hazavao ny loza mety hitranga amin'ny finoana fa voaaro amin'ny fomba tsotra ao ambadiky ny anaran'ny fitiavana ...